Zimbabwe Govt, EU to Build Schools, New Health Infrastructure - allAfrica.com
The Zimbabwe government is planning to build 24 new district hospitals and has already engaged partners in the European Union for support in investment, Vice President Constantino Chiwenga has said. Speaking after a meeting with the EU Ambassador to Zimbabwe Timo Olkkonen, Chiwenga, who is also the Minister of Health and Child Care, said the government has expressed commitment to foster transparency and accountability in the use of donor funding extended towards the country's health sector to ensure continuity of programmes and the building of new hospitals. In 2019, Zimbabwe and the EU launched a formal dialogue process in which Olkkonen expressed satisfaction over the government's "seriousness" in its reform agenda but said the bloc was worried by continued State victimisation of civil society activists.
The Herald, 26 March 2021
Government has expressed commitment to foster transparency and accountability in the use of donor funding extended towards the country's health sector to ensure continuity of… Read more »
New Zimbabwe, 19 February 2021
THE European Union (EU) has renewed sanctions against the Zanu PF led government while maintaining a targeted asset freeze on the Zimbabwe Defence Industries (ZDI). Read more »
The European Union welcomes further opportunities for continued dialogue and engagement with Zimbabwe and reiterates its ambition for a more constructive relationship. Read more »
Zimbabwe and the European Union have launched a formal dialogue process based on Article 8 of the Cotonou Partnership Agreement which governs relations between member states of the ... Read more »
Vice President Constantino Chiwenga speaks to European Union Ambassador to Zimbabwe Timo Olkkonen in Harare.